Isku dayga dil oo Erdogan ka badbaaday | Radio Hormuud
Wararka ka imaanaya dalka Turkiga ayaa sheegaya in gaadhi uu saarnaa askari ka tirsan ciidamada booliiska laga helay walxaha qarxa, kaas oo qayb ka ahaa ilaalada isusoobax uu ka qaybgalay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Qalabkan qarxa ayaa waxaa helay saraakiil ka tirsan sirdoonka Turkiga daqiiqado ka hor inta uusan bilaabmin isu soo bax ka dhacay magaalada Siirit ee koonfur bari dalkaasi. Waxaana ka hor tegay koox booliis ah oo bambaanooyinka ku takhusasay.
Waxa uu sidoo kale bogaadiyay doorka bulshada rayidka ah iyo adeegyada dowladda ee sanadihii lasoo dhaafay.
"Haddii Alle idmo waxaan xasilin doonnaa dhammaan isbedbedelka sicirka iyo sarifka lacagaha qalaad muddo aan sidaas u dheereyn," ayuu Erdogan u sheegay dad isugu soo baxay magaalada Siirt ee bariga dalkaasi.
"Weligay kama tanaasuli doono arrintan sababtoo ah heerka dulsaarka ayaa ah cudur ka dhigaya kuwa taajiriinta ah kuwa sii taajira oo hodan sii noqdahala saboolkana uu ka sii dhigayo kuwo sii faqiira" lacagta Turkiga ee Liiraha.